အနားယူတဲ့ရက်တွေမှာတောင် လှပြီးအမြဲချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ ပိုးမမှီသာ – Cele Oscar
ပရိသတ်ကြီးရေ …..တက်သစ်စ အနုပညာရှင် လေးဖြစ်ပေမယ့် ပရိသတ်တွေ ရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှု ကို အပြည့်အ၀ရရှိနေတဲ့ ဆရာဝန်မ လေး ပိုးမမှီသာ ကိုသိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ သူမဟာ စိုင်းစိုင်းခမ်းလိုင် ရဲ့ music videoလေး ကနေတစ်ဆင့် ပရိသတ်တွေ သတိထားမိလာခဲ့ပြီး သူမ ရဲ့ ချစ်စဖွယ် အပြုံးချိုချိုလေးတွေကြောင့် ပုရိသတွေ ရဲ့ဝန်းရံအားပေးမှု ကို အပြည့်အ၀ သိမ်းပိုက်ထားသူလေး လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ပိုးမမှီသာ ဟာ ဝါသနာ ပါရာအနုပညာအလုပ် ကိုလည်း လုပ်ကိုင်နေသလို ဆရာဝန်မလေး တစ်ယောက်အဖြစ် လည်း ကျေပွန်စွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ပိုးမမှီသာ ရဲ့ ဖြူစင်တဲ့ စိတ်ထားလေး နဲ့ တာဝန်သိတတ်မှု တွေကြောင့် ပရိသတ်တွေက သူမကို အချစ်တွေ ပိုပြီးရင်းပိုနေကြတာလည်း တွေ့ရပါတယ်နော်…..။
အခုဆိုရင် လည်း ပိုးမမှီသာ ဟာ ဂျူတီချိန် တွေပြီးလို့ အလုပ်အားတဲ့ အချိန်လေးမှာ ပရိသတ်တွေအလွမ်းပြေဖို့ အတွက် ချစ်စရာပုံလေးတွေသူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာ “အတူမရှိရတဲ့ ဆောင်းညအလယ်…. current favorite song..” ဆိုတဲ့ caption လေးနဲ့အတူ တင်ပေးလာခဲ့ပါတယ်။ ကဲ…..ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
သတင်းအရင်းမြစ်: Poe Mamhe Thar’s Facebook acc
ပရိသတျကွီးရေ …..တကျသဈစ အနုပညာရှငျ လေးဖွဈပမေယျ့ ပရိသတျတှေ ရဲ့ ခဈြခငျအားပေးမှု ကို အပွညျ့အဝရရှိနတေဲ့ ဆရာဝနျမ လေး ပိုးမမှီသာ ကိုသိကွမယျထငျပါတယျနျော။ သူမဟာ စိုငျးစိုငျးခမျးလိုငျ ရဲ့ music videoလေး ကနတေဈဆငျ့ ပရိသတျတှေ သတိထားမိလာခဲ့ပွီး သူမ ရဲ့ ခဈြစဖှယျ အပွုံးခြိုခြိုလေးတှကွေောငျ့ ပုရိသတှေ ရဲ့ဝနျးရံအားပေးမှု ကို အပွညျ့အဝ သိမျးပိုကျထားသူလေး လညျးဖွဈပါတယျ။
ပိုးမမှီသာ ဟာ ဝါသနာ ပါရာအနုပညာအလုပျ ကိုလညျး လုပျကိုငျနသေလို ဆရာဝနျမလေး တဈယောကျအဖွဈ လညျး ကပြှေနျစှာ တာဝနျထမျးဆောငျနတောလညျး တှရေ့ပါတယျ။ ပိုးမမှီသာ ရဲ့ ဖွူစငျတဲ့ စိတျထားလေး နဲ့ တာဝနျသိတတျမှု တှကွေောငျ့ ပရိသတျတှကေ သူမကို အခဈြတှေ ပိုပွီးရငျးပိုနကွေတာလညျး တှရေ့ပါတယျနျော…..။
အခုဆိုရငျ လညျး ပိုးမမှီသာ ဟာ ဂြူတီခြိနျ တှပွေီးလို့ အလုပျအားတဲ့ အခြိနျလေးမှာ ပရိသတျတှအေလှမျးပွဖေို့ အတှကျ ခဈြစရာပုံလေးတှသေူမရဲ့ Facebook စာမကျြနှာမှာ “အတူမရှိရတဲ့ ဆောငျးညအလယျ…. current favorite song..” ဆိုတဲ့ caption လေးနဲ့အတူ တငျပေးလာခဲ့ပါတယျ။ ကဲ…..ပရိသတျတှအေတှကျ ပွနျလညျ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော။
သတငျးအရငျးမွဈ: Poe Mamhe Thar’s Facebook acc